Haddii Ayna Halkan Arin Samayn Kooxaha Man United, Chelsea Iyo Arsenal, Koobab Kulama Tartami Karaan Liverpool & Man City. - Gool24.Net
Haddii Ayna Halkan Arin Samayn Kooxaha Man United, Chelsea Iyo Arsenal, Koobab Kulama Tartami Karaan Liverpool & Man City.
June 24, 2019 Mahamoud Batalaale
In Ole Gunnar Solskjaer uu yahay ninkii u haboonaa ee Manchester United ka saari lahaa xaalada xun ee ay ku jirto ayaa ah mid aan laysku raacsanayn waxaana jira dad aaminsan in aanu Solskjaer awoodi doonin in uu wax badan ka badalo xaalada Man United.
Halyaygii hore ee kooxda Liverpool ee John Aldridge ayaa sheegay in Ole Gunnar Solskjaer uu nin fiican yahay balse aanu ahayn kii ku haboonaa ee Manchester United ka saari lahaa xaalada ay ku jiraan.
John Aldridge ayaa ku dooday in Ole Gunnar Solskjaer uu ka mid noqon doono musharixiinta ugu horeeya ee tababaryaaasha Premier league ee dhibanaha unoqon doona shaqo ka caydhinta xili ciyaareedka cusub ee soo socda.
Sababta uu John Aldridge arintan u adeegsaday ayaa ah mid aan cidna ka qarsoonayn taas oo ah qaabka liita ee ay Manchester United suuqa ugu jirto wuxuuna John Aldridge ku dooday in United ayna Solskjaer siin doonin fursada uu uga baahan yahay.
Dhinaca kale John Aldridge ayaa ku dooday in kooxaha Manchester United, Arsenal iyo Chelsea looga baahan yahay in ay isbadalo waa wayn sameeyaan xagaagan haddii ay doonayaan in ay ku soo dhawaadaan Man City iyo Liverpool.
Ugu horayn John Aldridge oo ka hadlaya Solkjaer ayaa yidhi: “Solkjaeer waxa uu u muuqdaa nin fiican, laakiin ma jirto cadayn ah in uu in ku filan u fiican yahay in uu Manchester United ka saaro xaalada hadda, waxaanan aaminsanahay in uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu cad cad dhibahayaaasha u noqon doona shaqo ka caydhinta xili ciyaareedka cusub”.
“Waxay United u muuqataa in ay suuqa kala iibsiga ka bartilmaameedsanayso ciyaartoy da’yar ah iyada oo ay tahay badalaada jihada oo waqti dheer abaal marinteeda la guran karo, waxaa loo baahan yahay in dulqaad ay muujiiyaan mulkiilayaasha iyo taageerayaashu ka hor inta aan la arag faa’iida dhiiga da’yarta” ayuu John Aldridge hadalkiisa raaciyay.
John Aldridge ayaa su’aashan is waydiiyay: “Miyay United sugi kartaa saddex sanadood ka hor inta ayna caruurta ay iyagu la soo saxiixdeen ku horumarayaan ciyaartoy heer sare ah?”.
Intaas kadib John Aldridge ayaa jawaabta uu filayo bixiyay: “Anigu ma arko taas oo dhacaysa waana sababta aanan u arkayn in uu tababarahooda haddu waqti badan shaqada sii joogi doono”.
Laakiin John Aldridge ayaa aaminsan in kooxaha Manchester United, Arsenal iyo Chelsea ay dhamaantood u baahan yihiin isbadalo waa wayn si ay ugu soo dhawaan karaan kooxaha Man City iyo Liverpool.
John Aldridge oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Manchester United, Arsenal iyo Chelsea waxay dhamaantood u baahan yihiin isbadalo waa wayn si ay uga soo agdhawaadaan labada sare, anigu marka aan qiimeeyo waxay u baahan yihiin in ay xagaagan sameeyaan (isbadalka)”.
“Anigu ma filayo in ay waqti dhaw koobab ku tartami doonaan” ayuu John Aldridge hadalkiisa ku soo xidhay .